राष्ट्रिय दैनिक तथा टेलिभिजनहरुमा काम गर्नु हुन्छ, उहा“हरुलाई गाह्रो छ । कारण, राजधानीका मिडियालाई निर्वाचनको माहौंल बनाउनु छ, मधेशमा माहौलनै छैन, जबरजस्ती कसरी बनाउनु ? जे हो त्यहि परिस्थितिको रिपोर्टि· गर्दा समाचार नछापिएको पनि पाइयो । जसका कारण पत्रकारहरुमा निराशा छाउनु स्वभाविक हो । सप्तरी, सिराहा जस्ता जिल्लाहरु जहा“ स्ववियूको चुनाव हुन सकेको छैन, पत्रकार महासंघको चुनाव भएको छैन अरु निर्वाचन के होला र ? स्थानीय निर्वाचनका लागि परिस्थिति त्यति सहज देख्दिन ।
–बबिता बस्नेत ,बरिष्ठ पत्रकार
तीन दशक अघिको कुरा हो, पच कक्षा सकेर ६ कक्षामा पुग्दा मैंले पहिलो पल्ट मधेश देखें, ११ बर्षकी थिए“ । खोटा·को सालम्बुमा जन्मिएर त्यही हुर्किएकी मलाई मधेश कस्तो हुन्छ थाहा थिएन । मधेशमा मोटर गुड्छ, बिजुली बत्ति हुन्छ भन्ने कुरा चांही सुनेकी थिए“ ।
मधेशबाट जानेहरुले कोशेलीका रुपमा लाने गरेका कारण जुलेवी (जेरी) र बुनिया पाइन्छ भन्ने पनि थाहा थियो । मधेशको पहिलो यात्रा सप्तरी फत्तेपुरको थियो, जहा“ ठुलो बुवाहरु बस्नुहुन्थ्यो । भीर, पाखा, खोला, उकालो ओह्रालो गर्दै डेढ दिन हिडेपछि समथर बेल्टार आइ पुग्दा गजब लागेको थियो ।
धेरै थाकेकाले राती ढिलो निदाए“, कहिल्यै नसुनेको आवाजले ब्युझिदा बिहानको चार बजेको रहेछ । के हो के हो, के कराएको होला यसरी ? अचम्म लाग्यो, डराए“ र ठुलो बुवाकी छोरी शारदा दिदीलाई सोधें—दिदी के कराएको? मैंले डरा उदै उठेर सोधेपछि उहा“ले निन्द्रामैं भन्नु भो—ए नडराउ, त्यो बसको हर्न हो ।
त्यतिबेलाको चर्चित दास बसले बिहान चार बजे देखिनै हर्न लगाएर मान्छे बोलाउदो रहेछ । फत्तेपुर बजारमा लगाएको हर्नले सिद्धिपुरको घरमा सुतेकी म एक्कासी ब्युझिएकी थिए“ । त्यसको भोली पल्ट देखि भुइमा उज्यालो नखस्दै दास बसको हर्न नियमितता बन्यो । पहाडमा हामी ६ बजे सम्म सुत्थ्यौं, कति दिन मलाई निन्द्रा नपुगे जस्तो भयो ।
एसएलसी सकेर काठ्माण्डौ बस्न थालेपछि दिन चर्या फरक भयो । कहिलेकांही मधेश जा“दा गाडी र बाइकमा दाईहरुले चर्को हर्न बजाउदा सोधें, किन यस्तो हर्न लगाएको? जबाफ आयो—यहा“ यस्तै हुन्छ । पान खाएर आफ्नै आगन वरीपरी थुकेको दृष्य हेर्न नसकेर सोधें, के गरेको यस्तो? जबाफ आयो—मधेशमा यस्तै त हुन्छ नि ।
मधेशका कार्यालयका भित्ताहरुमा पान खाएर थुक्दै हिड्नेहरु मधेशी समूदायका मात्रै हुन भनेर कसैले सोच्छ भनें त्यो गलत हो । पहाडी समूदायका मानिसहरुले पनि त्यसैगरी बेपर्वाह थुकि रहेका मैंले धेरै पल्ट देखेकी छु ।
कामको सिलसिलामा मधेशका बिभिन्न जिल्ला जादा बिहान चार बजे देखिनै ठुलो माइक लाएर गीत बजाएको सुन्न थालेपछि यस प्रकारका कुनै पनि होहल्ला सामान्य लाग्न थाल्यो । गीत, संगित ब्यक्तिको नितान्त नीजि आदतको कुरा हो । कसैलाई सुन्न मन लाग्छ, कसैलाई लाग्दैन । सुन्नै मन लागेपनि कसैलाई कस्तो सुन्न मन लाग्छ कसैलाई कस्तो ।
मुड, वातावरण, परिस्थिति जस्ता कुराहरुले गीत संगितको छनौट निर्धारण गर्छ । तर एका बिहानै माइकमा गीत लगाएर बजाउनु पर्ने किन? मैंले अहिले सम्म कसैसंग प्रश्न गरेकी छैन । कारण, फेरि उही जबाफ आउन सक्छ—मधेशमा यस्तै हुन्छ ।
तर बिहान बिहानै माइकको ठुलो स्वर अहिले पहाड तिर पनि सरेछ । केही समय अगाडी डोटी पुग्दा बिहान चार बजे देखिनै दिपायल बजारभरी माइकबाट भजन सुनियो । त्यहा“का पूजारीले गरेको पूजा पाठ पनि माइकमैं लगाइएको थियो ।
कामको शिलसिलामा मधेश जान थालेपछि थाहा भयो, राम्रा कुरा धेरै रहेछन मधेशमा । वातावरणको हिसावले हि“उदमा हुरी, बर्षामा डुबान, चर्को गर्मी, सर्पको बिगबिगी, जाडोमा शित लहर मधेश त्यति सहज छैन । तर प्रायः सबै ठाउमा यातायात र बिजुली पुगेका कारणले दुखहरु झेल्न सजिलो भएको छ ।
काठ्माण्डौ र पहाडमा मधेश र मधेशीका बारेमा जतिसुकै हाउगुजी देखाए पनि जनस्तरमा कुनै तुष देखिदैन ।
एक छिन बसौं न पानी, सर्वत खाएर जानुस न भन्ने संस्कृति छ । ‘हामी त नेपाली’ भन्ने भावना पनि त्यतिकै देख्छु । एक पटक महोत्तरीको गाउ“मा पुगेको बेला अलि पछि बसोबास गर्न आएकाहरुका बारेमा कुरा गर्दै एक अधबैंशे महिलाले भनेकी थिइन, उनीहरु जस्तो हो र ? ‘हामी त नेपाली ’यही जन्मिएको ।
पछि आएका र हामीबीचमा फरक त हुनु प¥यो नि भन्ने शैलीमा उनले भनेका कुराहरु पछि सम्म कानमा गुञ्जिएका थिए । बिहेवारीमा पनि अहिले सके सम्म छोरी हरु वारीनै दिने चलन बढ्दै गएको छ । पारी बिहे भएका गाउ“का छोरी बेटीहरु माथि घरेलु हिंसा भएपछि जे भएपनि आफ्नै ठाउ“मा बिहे गर्ने भन्ने सोच बढेको देख्छु ।
मेरो २५ बर्षका ब्यवसायिक जीवनमा मधेशमा जा“दा अफ्ठ्यारो भएको संझना छैन । आफ्ना उमेरका पत्रकार साथीहरु, केही दाईहरु र धेरै भाईहरुले गरेको सौहाद्र्धपूर्ण ब्यवहार मन छुने प्रकारको छ । हिजो आज बैनीहरु पनि मिडियामा आएका छन, उनीहरुको ब्यवहार त राम्रो हुनेनै भयो । हिजोआज धेरै मानिसको मुखबाट मधेशमा आफ्ठ्यारो छ, गाह्रो छ भनेको सुन्छु ।
राजनीतिक साह्रो गाह्रो पक्कै छ तर जनस्तरमा र ब्यवसायिक स्तरमा त्यति धेरै कठिनाई भोग्नु परेको छैन । द्न्द बढ्दै गयो भनें स्वभाविक रुपमा अन्य तमाम मानिसहरुले भोग्ने दुखहरु सहनुनै पर्नेछ ।
जस्तो, यही फाल्गुण २१ गते सप्तरीको राजबिराज पुग्दा एमाले र केपी ओलीका बिरुद्ध माइकि· चलि रहेको थियो । मानिसहरु कालो झण्डा लिएर जुलुशमा थिए ।
हामी चढेको गाडी रोक्दै उनीहरुले ‘यहा“ कोही एमाले हुनुहुन्छ कि’ भनेर सोधे । हामी त होइन, मिडियाको मानिस हो भनेंपछि ल जानुस भनियो ।
अहिलेको द्वन्द बढ्दै गए मिडियाका साथीहरुलाई अफ्यारो हुने देख्छु । साथीहरु जो राष्ट्रिय दैनिक तथा टेलिभिजनहरुमा काम गर्नु हुन्छ, उहा“हरुलाई गाह्रो छ । कारण, राजधानीका मिडियालाई निर्वाचनको माहौंल बनाउनु छ, मधेशमा माहौलनै छैन, जबरजस्ती कसरी बनाउनु? जे हो त्यहि परिस्थितिको रिपोर्टि· गर्दा समाचार नछापिएको पनि पाइयो ।
जसका कारण पत्रकारहरुमा निराशा छाउनु स्वभाविक हो । सप्तरी, सिराहा जस्ता जिल्लाहरु जहा“ स्ववियूको चुनाव हुन सकेको छैन, पत्रकार महासंघको चुनाव भएको छैन अरु निर्वाचन के होला र? स्थानीय निर्वाचनका लागि परिस्थिति त्यति सहज देख्दिन ।
यस पटकको मधेश यात्रामा अलि नया“ कुरा महशुस गरियो । बिहान बिहानै माइक लगाएर प्रायः हिन्दी गीत सुन्न पाइने मधेशमा यस पटक ‘सुन साइली परदेशबाट म आउ“ला, चालिस कटेसी रमाउला’ र ‘पिउन मन थिएन साथीले पिलायो’ भन्ने गीत खुब सुनियो ।
बिदेशमा रहने नेपालीहरुबीच प्रीय बनेको सुन साइली मधेशका युवाहरुबीच पनि त्यतिकै चर्चित रहेछ । कारण, मधेशका घरहरु पनि अब बेदेशिक रोजगारको कहानी भन्दा बाहिर रहेनन । दिन प्रतिदिन मधेशबाट पनि युवाहरु बिदेशिने क्रम बढि रहेको छ ।
बेरोजगारी मुलुकका अन्य स्थानको जस्तै मधेशको पनि ठुलो चुनौती हो । मधेशको उर्वर भूमिमा नया“ तरिकाबाट कृषी र बिभिन्न स्थानमा उधोग ब्यवसाय गर्न पाए गाउ“मैं रोजगारीको सिर्जना हुने थियो । गर्न चाहने हो भनें मधेशमा संभावनाहरु धेरै छन तर राजनीतिक द्वन्दले ति संभावनाहरुलाई छोपि रहेको छ ।